Shirkad lacag ku bixineysa in aad u ogolaato in baranbaro ay gurigaaga ku sii deyso | dayniiile.com
Home WARKII Shirkad lacag ku bixineysa in aad u ogolaato in baranbaro ay gurigaaga...
Shirkad lacag ku bixineysa in aad u ogolaato in baranbaro ay gurigaaga ku sii deyso
Shirkad ka shaqeysa la dagaalanka cayayaanka oo fadhigeedu yahay Waqooyiga Karolina ee dalka Mareykanka ayaa bixinaysa $2,000 si milkiilayaasha guryaha ay ugu oggolaadaan inay baranbaro ku sii daayaan gurigooda.
Shirkada oo lagu magaacabo , “The Pest Informer”, ayaa boggeeda internetka ku sheegtay inay raadinayso shan ilaa toddobo qoys oo u oggolaada farsamayaqaannadeeda cayayaanka inay guryahooda ku sii daayaan ilaa 100 baranbaro muddo 30 maalmood ah.
Shuruudaha ay shirkada hor dhigtay dadka doonaya inay ka qeybgalaan daraasadan ayaa waxaa kamid ah:
Waxaa mulkiilaha guriga looga baahnayahay ogolaansho qoraal ah , kaas oo ah inuu yahay ugu yaraan da’da 21, gurigana waa inuu ku yaal meel ka mid ah magaalooyinka Maraykanka.
Shirkaddu waxay sheegtay in habkani uu u oggolaan doono inay barato “farsamo gaar ah oo ka hortagga cayayaanka.” Daraasadu waxay qaadan doontaa ilaa 30 maalmood waxayna u baahan doontaa farsamoyaqaanno inay muqaalo ka duubaan.
Previous articleDowlada Japan oo qaadday talaabooyin adag oo ay wax kaga qabanayso dhibaatada ay dadkeeda kala kulmaan dhanka online-ka
Next articleIsraaiil oo duqeymo ka geystay marinka Qazza.
Dibadbaxyo Rabshado isu badalay Rabshado ayaa ka dhacay Magaalada Diridhabe
Shiinaha oo diyaarado dagaal u diray jasiirad uu Mareykanka isha ku...
Todd Boehly oo ah nin maal qabeen ah oo ugu dambeyntii...